40 लागि परिणाम batman
नौकर गरेको परम उद्धार
नौकर गरेको परम उद्धार अनलाइन खेल भनेर निःशुल्क खेल्न सक्छन् छ। छत बन्द हाम फाल्ने र छत बाट मानिस सुरक्षित गर्न आफ्नो सुपर हिरो नौकर नियन्त्रण। Gook भाग्य!
नौकर अचम्मको साहसिक
नौकर नयाँ संसारमा एक साहसिक छ, उहाँलाई तीर प्रमुख र एउटा मुख्य प्रयोग गरेर सबै शत्रु आक्रमण गर्न मद्दत गर्छ।
नौकर भूल शहर
नौकर यो शहर बाहिर बाटो खोज्न सहयोग गर्नुहोस्। त्यहाँ खेल मा धेरै स्तर छन्, कृपया यसलाई पूरा र थप स्कोर प्राप्त।
नौकर सुपर किक
यो खेल हाम्रो नौकर फिर्ती। आफ्नो मिशन न्यूयोर्क शहर नाश गर्न सबै शत्रु मार्न छ। उहाँलाई सडक सबै शत्रु बर्खास्त र यो खेल को सबै स्तर समाप्त गर्न मद्दत गर्छ।
नौकर हेलिकप्टर शो
नौकर हेलिकप्टर चलाउनु दुबला, आफ्नो पहिलो चुनौती हेलिकप्टर अवरोध हटाउन चलाउनु थियो। तपाईं कौशलतासाथ साँचाहरू ए, एस, डी, डब्ल्यू नियन्त्रण हेलिकप्टर नौकर मदत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
नौकर गुफा रन
नौकर जोकर chasing थियो र अब नौकर, गुफाको मा फँस छ, गुफा बाट उम्कन गर्न भाँचिएको बाटो कूद र एक उच्च स्कोर बनाउन सबै चमेरो सङ्कलन सहायता नौकर।
आफ्नो बाइक मा lego नौकर रूपमा Gotham वरिपरि दौड! ज्योति पुग्न छत मार्फत अंक आफ्नो बाटो कमाउन र सार्नुहोस् गर्न शहर भर ब्याटिङ-सिक्का सङ्कलन।
यो के तपाईं चिसो उम्कन, अन्य ट्रयाक एकातिर देखि नृत्य गर्न चपलता देखाउन मद्दत हुनेछ नौकर आफ्नो शत्रुहरू को ज्यान छ भनेर देखिन्छ र, त्यसैले उहाँले chasing कि कार विस्फोट गर्न गोली मार गर्न सक्छन्।
सावधान नौकर Gotham सडकमा खेल
को batmobile अप आगो र Gotham सडकमा शहर लिन फिर्ता! Gotham गल्लीहरूमा गुंडे र अपराधीहरूलाई संग दखल गर्नू छन्। शत्रु कार र हवाई drones तल शिकार प्रयोगात्मक हतियार नौकर गरेको शस्त्रागार प्रयोग गर्नुहोस्। खलनायक सावधान! नौकर एक मा waging छ
नौकर स्टन्ट खेल
अन्धकारमा नाइट नौकर सवारी र स्टन्ट प्रदर्शन स्तर पूरा गर्नको लागि। अगाडि फ्लिप, backflip र अन्य स्टन्ट गरेर आफ्नो तोकिएको कार्य जाँच game.Unlock अन्य स्टन्ट तल स्क्रीन मा। के तपाईं बाँच्न सीमित जीवन छ।
नौकर underworld खेल
त्यहाँ अर्को ग्रह Gotham शहर आक्रमण गर्न उतरा देखि राक्षस को एक समूह छ। नौकर शहर जोगाउन सबै राक्षस मार्ने मद्दत गर्नुहोस्। नियन्त्रण: मारो, कश्मीर जानुहोस् गर्न Grenade फेंक, एल:, जे सार्न WASD गर्न
साझेदार चयन र विजय आफ्नो बाटो मुक्का। कम्बो चाल, छिटो प्रतिक्रिया, र एक भन्दा बढी-द-काँध क्यामेरा कोण यो खेल रमाइलो र पूर्ण अद्वितीय बनाउन।
नौकर अन्तिम चुनौती
नौकर motobike साहसिक मा, बाटोमा सबै अवरोध हटाउन अङ्क वृद्धि गर्न बाटो मा प्रतिमा प्राप्त। कृपया मद्दत नौकर यो motobike ड्राइव सबै levels.Use तीर प्रमुख पारित
गाढा नाइट सवार
नौकर राम्रो कारण लागि फेरि rises! आठ वर्ष मा, एक नयाँ आतंककारी नेता, Bane, Gotham गरेको उत्कृष्ट overwhelms र गाढा नाइट उहाँलाई शत्रु ब्रांडेड छ कि एक शहर जोगाउन resurfaces। शत्रुहरू को ट्यांक र कन्टेनर मा यात्रा गर्दै छन्। नष्ट
नौकर3- सुरक्षित Gotham
यो जोकर Gotham शहर र मात्र नौकर यो दुष्ट खलनायक रोक्न र धेरै बहुमुखी छ कि जोकर विरुद्ध मानिस ब्याटिङ गोली शहर को मद्दतले आफ्नो नागरिक बन्द गर्न सक्नुहुन्छ barbarizando छ जस्तो देखिन्छ र को विभिन्न ठाउँमा देखा छ
batmans शक्ति हडताल
नौकर फेरि अपराध देखि शहर रक्षा Gotham को सडकमा छ।
नौकर - को नाइट सवार
नौकर संग रोमाञ्चकारी साहसिक - द नाइट सवार। आफ्नो बाइक चयन, बाधाहरूलाई पार, अंक कमाउन नौकर ग्याजेटहरू सङ्कलन। आफ्नो कौशल स्तरवृद्धि गर्न स्टोरमा आफ्नो बाइक किन्न। असीमित मजा संग पार गर्न रोमाञ्चक स्तर!
नौकर मृत शहर
अंक प्राप्त गर्न मरेको city.Collect सिक्का पुग्न नौकर सवारी। अतिरिक्त अंक हरेक फ्लिप लागि थपिनेछ।
गोरिल्ला grodd को बदला
मानिस ब्याटिङ यो साहसिक सोच्नुहोस्। Batma दुष्ट गोरिल्ला Grodd र खतरनाक रोक्न पर्छ। उहाँले बम गर्दा यो राजमार्ग मा एक कार चलिरहेको र BATM को दिशा मा वस्तुहरु फेंक गर्नुपर्छ। वस्तुहरु deflect छिटो हुन। तपाईं एक हिप र PA गर्न हुनेछ
नौकर रात भाग्ने
नौकर Gotham शहर को सडकमा समस्या छ र आफ्नो बाटो मा उहाँलाई मार्गदर्शन गर्न आफ्नो सहयोगको आवश्यक पर्दछ।
नौकर Gotham शहर भीड
platformed यो ननस्टप आर्केड मा Gotham शहर को माइल पछि जम्प, उठाउँछ र स्लाइड माइल मार्फत।
नौकर को मार्स पत्ता
नौकर एक अन्तरिक्ष यात्री भए, तर मंगल खतरापूर्ण rife छ उहाँले गुमाए, तपाईं को नौकर पृथ्वीमा सुरक्षित फर्कन रक्स र meteorite टुकडे जोगिन मदत।
नौकर परीक्षण आफ्नो नयाँ ब्याट-ट्रक मद्दत गर्नुहोस्। थप स्कोर लागि, हावा मा चमेरो सङ्कलन र आफ्नो बढावा अप माथि।
नौकर फ्लैश अनलाइन खेल। एक राम्रो त यो बाहिर gamebuss.com मा यहाँ प्रयास गर्नुहोस्!
नौकर खतरनाक भवन
पाँच खतरनाक टावर चढाई मदत आफ्नो मनपर्ने नायक नौकर। आफ्नो मिशन असफल बनाउन प्रयास गर्ने जोकर होसियार हुनुहोस्।
परदेशी अचानक Gotham शहर मा एक क्रूर आश्चर्य आक्रमण सुरु! नौकर विदेशी drones को छालहरू मार्फत आफ्नो बाटो बनाउन र विदेशी मालिक नष्ट मदत!
नौकर को cobblebot केपर
साहसिक खेल जहाँ तपाईं नौकर नियन्त्रण - बैटमैन भएको Cobblebot केपर एक हास्यास्पद फ्लैश कार्य हो। माथि स्तर आफ्नो बाटो झगडा र gamebuss.com मा अन्तिम मालिक पिटाई रमाइलो!
नौकर बनाम कोरस
यहाँ अर्को रोचक बल खेल हो। यो समय नौकर र कोरस यस खेलका लागि यहाँ छन्। तपाईं टोकरी मा बल फ्याँक्छन् स्कोर प्राप्त। खेल आनन्द लिनुहोस्
नौकर परीक्षण आफ्नो नयाँ ब्याट-ट्रक मद्दत गर्नुहोस्। निर्देश: प्रयोग तीर कुंजी, थप स्कोर लागि, हावा मा चमेरो सङ्कलन र आफ्नो बढावा अप माथि। तपाईं कुन ठाउँ थिचेर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Drag and drop your firing probe as you collect glowing orbs in order to upgrade your defenses.
Warface - उत्कृष्ट ग्राफिक्स संग एक लात-गधा शूटर खेल, राम्रो देख बालिका र रक रोल संगीत! कौशल र रणनीति को एक suspenseful खेल। वरिपरि सार्न र लक्ष्य गर्न, माउस प्रयोग गोली बायाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं MME को यस्तो प्यारा पिल्ला उत्पादन लागि जिम्मेवार छन्। यो सिर्फ एक लक्जरी हुनु आवश्यक छ सबै किन दुनिया बाट उहाँले सुन्दर कुकुर को एक प्रतियोगिता मा भाग हुनेछ। स्टाइलिश, सुशील संगठनों र साजसज्जा केश। यो कुकुर पनि हुन सक्छ छ
नियमित शो उद्धार मोर्दकै 2
यो खेलमा, Rigby क्लाउडमा हिँड्नुहोस् मोर्दकै उद्धार गर्न छ। तीर प्रमुख उसलाई मदत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
BMX स्टन्ट 2
पेडल गर्न सक्छन् तपाईं जस्तै आइटम सङ्कलन र धेरै अंक स्कोर चाल के स्पेसबार = ट्याप -! तीर = जम्प